GTT International - Genève: Dinika FFKM : “aoka mba ho iray izy rehetra”
- Ny fahadisoana vitantsika dia ny nanilihana ireo rahalahy sy anabavintsika teo amin’ny fitantanana ny Firenentsika.
- Nanjary niray tsikombakomba tamin’ny gaboraraka sy ny fandrobàna ny harem-pirenena isika satria tsy nampanjakaina sy tsy namasinina ny hevitry ny rehetra, izayfototry ny marimaritra iraisina mitandro ny FIHAVANANA tena sarobidy amintsika Malagasy. Gaga ary ve isika raha niainantsika teto ny didikofehy lehibe sy ny kely tsy mba mamindro?
- Tsy nandray andraikitra isika ary azo lazaina ihany koa fa nialangalana ireo avaram-pianarana Malagasy satria tsy nitandrovan’izy ireo ny atao hoe “valim-babena”.
Nalaina tao amin'i Mydago.com
Album SARY IVATO FARANY